अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई सन्तुलन गर्नेछौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई सन्तुलन गर्नेछौं
अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई सन्तुलन गर्नेछौं
‘हाम्रो पौरख हाम्रो कर : राष्ट्र निर्माणको दिगो भर’ नाराका साथ आज सरकारले छैटौं कर दिवस मनाउँदै छ । गत आर्थिक वर्ष करीब ५ सय ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा यस वर्ष सरकारले ७ सय ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुरूप उठाउन नसके पनि लक्ष्यको नजीक भने पुगेको हालसम्मको स्थिति छ । यद्यपि, सरकार सङ्घीयतामा गएसँगै कर सङ्कलनमा केन्द्र र सङ्घको अधिकार बाँडफाँटसहित कर प्रशासन र राजस्व सङ्कलनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रस्तुत छ, छैंटौं कर दिवस कर सङ्कलनमा सरकारी रणनीति र हालको वस्तुस्थितिबारे नेपाल सरकारका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानासँग अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :
छैटौं कर दिवस समारोहका विषयमा केही जानकारी दिनुहोस् न ?
छैटौं कर दिवस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मूल व्यवस्थापन समितिले आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष कर दिवसको अवसरमा पुरस्कृत गरिने करदाता र कर्मचारीको छनोट गरिसकेको छ । दिवसको बिहान आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालय लाजिम्पाटबाट कार्यक्रमस्थल राष्ट्रिय सभागृहसम्म सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पदयात्रा गर्छौं । सभागृहमा प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । हामीले सबै नेतृत्वदायी सङ्गठनका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरेका छौं । यसैगरी नेपाल सरकारका पदाधिकारी, करदातालगायत सहभागी हुनेछन् ।
करदातालाई सम्मान गर्न र स्वतःस्फूर्त कर तिर्ने वातावरण बनाउन विभिन्न कार्यक्रमसहित कर दिवस मनाइँदै आएको छ । अहिलेसम्मको अनुभवबाट यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ?
कर दिवस भनेको करको बारेमा सचेतना, जागृति र क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्ने हो । कर तिर्नुपर्छ भन्ने यो साङ्केतिक अभियान हो । राज्यका लागि कर तिर्नुपर्छ भन्ने स्वतस्फूर्त जागरण सृजना गर्ने दिनका रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौैं । करको जागरण एक दिन मात्र गर्ने कुरा होइन, सधैं गर्नु पर्ने हो । बेलाबेलामा हामीले करको चर्चा घरघरमा भनेर नारा राख्ने गरेका छौं । राज्य सञ्चालनका लागि गरिने योगदान कर हो । यसैले कर र मृत्यु शाश्वत् छन् पनि भनिन्छ । कर र कर प्रशासन कसरी अघि बढिरहेको छ, आगामी दिनमा के कस्ता कार्यक्रम गर्छ भनेर जानकारी दिने, नीतिगत रूपमा कर प्रशासनमा गरिने सुधारका क्षेत्र के के हुन सक्छन् भनेर हेर्ने र १ वर्षभित्र गरेका कामकारबाहीको सिंहावलोकन गर्दै निजीक्षेत्रको पनि धारणा बुझ्ने दिनका रूपमा कर दिवसलाई लिने गरेका छौं । करबारे सचेतना बढ्दै गएकाले यो प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनमानसमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने जागृति तथा सचेतना बढ्दै गएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । कर सङ्कलनको आधार बढ्दै गएको छ । राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः फड्को मारिँदै छ । हामीले विस्तारै सुदृढ वित्तीय संरचनाको निर्माण गर्ने आधार तयार पार्दै छौं । आन्तरिक राजस्व परिचालनका स्तरहरू बढाउँदै छौं । विगतमा भन्सार बढी हुन्थ्यो । अहिले विस्तारै आन्तरिक मूल्यअभिवृद्धि र आयकरले भन्सारलाई प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था सृजना हुँदै गयो । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताको स्वरूप र अङ्क बढे पनि प्रतिशतमा कम हुँदै गए । हाम्रो आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र दक्षता बढ्दै गए । यसले राजस्व सङ्कलनको गति, तीव्रता क्रियाशीलता र प्रवृत्तिलाई देखाउँदै जान्छ । अहिले पनि हामी ७ सय ३० अर्बको राजस्व उठाउँदै छौं । जब कि गतवर्ष करीब ५ सय ९० अर्ब उठाएका थियौं । यसैले हामी अहिले पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न दृढ, क्रियाशील र प्रतिबद्ध छौं ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष राजस्व वृद्धिको लक्ष्य बढाउ“दै लगेको छ । तर, सो अनुपातमा अर्थतन्त्र वृद्धि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ?
त्यसो त होइन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर बढेको छ । मूल्यवृद्धि दर वाञ्छित सीमामा ल्याउन सकिएको छ । जीडीपी तथा प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा जति बढी उठ्यो, खर्च गर्ने सक्षमता पनि त्योअनुसार बढ्यो भने हामीले राखेको लक्ष्यलाई भेट्न सजिलो हुन्छ । खर्च हाम्रो लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सकेन तर राजस्व सङ्कलन बढ्यो । यसले पछाडिको कारण आर्थिक गतिविधिको तीव्रता बढ्दै गएको छ भन्ने प्रमाण त दियो तर खर्च वाञ्छित ढङ्गबाट भएन । सरकारी खर्चले मात्र राजस्व बढ्ने होइन । अर्थतन्त्र जति चलायमान बन्दै जान्छ, आर्थिक गतिविधि जति बढ्दै जान्छ, यसले राजस्व सङ्कलन पनि सोहीअनुसार बढ्दै जान्छ । सरकारले त सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ, जसको भूमिकाको आधारमा निजीक्षेत्रले लगानी वृद्धि गर्छ । यसले करका सम्भावना स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुँदै जान्छ । विस्तारै अनौपचारिक क्षेत्र पनि औपचारिक बन्दै गयो र हामीले त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन थाल्यौं । यसको कारण राजस्व सङ्कलनको दर तथा प्रवृत्ति बढ्दै गयो । दोस्रो, सरकारी र गैरसरकारीबाट निजीक्षेत्रमा हुने लगानीका हिस्सा बढ्दै गए । तेस्रो, कर प्रशासनको क्षेत्रमा गरेको निरन्तर सुधारको परिणामले प्रशासन र नीतिमा सकारात्मक योगदान गरेकाले पनि कर सङ्कलनको दायरा बढाउँदै गयो । चौथो, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि कर तथा राजस्व प्रशासनमा देखिएका सकारात्मक प्रभाव, विकास साझेदारले गरेका सहयोग, हाम्रा मान्छेका दक्षता, अर्थतन्त्रमा आएका चलायमान प्रवृत्तिलगायत कारण पनि राजस्व बढ्दै गयो ।
सरकारले लगातार केही करका दर बढाएको देखिन्छ । करको आधार र दायरा नबढाईकन दरमा मात्र वृद्धि गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर गर्दैन ?
करको दरमा हामी एकदम स्थिर छौं । भ्याटको दर धेरै अघि १० प्रतिशत थियो । यसपछि करीब विगत १ दशकदेखि अहिले १३ प्रतिशत मात्र छ, बढाइएको छैन । आयकरका दर, कर्पोरेट आम्दानीका दर परिवर्तन भएका छैनन् । अन्तःशुल्कअन्तर्गत मदिरा पदार्थ, खैनी, चुरोटबाहेकमा करको दर बढेको छैन । यसलाई भने हामीले विस्तारै बढाउँदै आएका छौं । स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्ने वस्तु वा सेवा विश्वव्यापी रूपमा निरुत्साहित गर्नेगरी कर बढाइनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अब दायरा विस्तार गर्न खोजेको हो । हामीले करको दर होइन, दायरा बढाउन खोजेका छौं । करको दायरा जति विस्तार हुँदै जान्छ, त्यति नै नयाँ करदाताको सङ्ख्या थपिँदै जान्छ र करको भार कम हुँदै जान्छ । हामीले धरातलीय क्षितिज समता कायम गर्ने प्रयास गरेका छौं । करले धनीलाई उचाल्न पर्‍यो र गरीबलाई उतार्न प¥यो ।
व्यक्तिगत आयकरको सन्दर्भमा सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा हेरेर कर छूट र कर लाग्ने आयको निर्धारण गरेको भन्ने आरोप छ । यसबाट निम्न, मध्यम वर्गीय आयकर्ता (करदाता)लाई बढी मार परेको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
‘गभर्न्मेण्ट इज रिगार्डेड एज द मोडल इम्प्लायर’ सबैको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबका आधारमा निर्धारण हुन्छ । सरकारले मानक (स्ट्याण्डर्ड) त बनाएको मात्रै हो । सरकारको उक्त दरलार्ई आधार बनाएर सरकारी तथा निजीक्षेत्रका सबै सेक्टरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लागू हुन्छ । सरकारी मात्रै म भन्दिनँ, निजीक्षेत्रमा काम गर्नेले पाउने पारिश्रमिकको निर्धारण केले गर्छ त ? सरकारले निर्धारण गरेको तलबअनुसार नै त हुन्छ । त्यसैले, एउटा स्ट्याण्डर्ड तय गर्न सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधालाई लिइएको हो । सरकारले मानक मात्रै तय गरेको हो, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएर निम्न, मध्यम आय भएका नागरिकहरूलाई प्रभाव पारेको होइन ।
सरकारले करको दायरामा आएका उद्योगी व्यवसायीबाट मात्रै सकेसम्म धेरै कर असुल्ने रणनीति अवलबम्न गरेको निजीक्षेत्रको आरोप छ नि ?
होइन, यसलाई त्यसरी नबुझौं । हामीले करको दायरामा आउनेलाई मात्रै कर लगाउने रणनीति लिएका होइनौं । जो करको दायरामा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई तटस्थ कर (तटस्थ कर प्रणालीको अवलम्बन गरी कर लगाउने व्यवस्था) लगाउँछौं । करको दायरामा नआउनेलाई करको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउँछौं र करको दायरामा नआउनेलाई करमा आउन लिगल एक्शन लिने गर्छौं । कर पालना बढाउने प्रयास गछौँ । यसको अर्थ कुनै अमुक करको दायरामा आएका उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै बढी दबाब दिएको पक्कै होइन । हाम्रो धारणा के हो भने करको दायरामा आउनेलाई मित्रवत् र सहयोगी व्यवहार गर्ने हो । करको दायरामा आउनै नचाहनेलाई हामी फरक उपाय अपनाएर करको दायरामा ल्याउनेछौं । जो करको दायरामा आउँदैनन्, तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन दबाबमूलक कार्यको माध्यमबाट (कानूनी तथा बाध्यकारी बनाएर) भए पनि करको दायरामा ल्याउने वातावरण तयार गर्छाैं । किनभने, कर तिर्नु सबैको दायित्व हो, दर्ता हुनेले मात्रै तिर्नुपर्छ भन्ने होइन । जसले कर योग्य आय गर्छ, त्यसले कर तिर्नैपर्छ ।
अन्य देशमा करदाताले आफ्नो आयबाट कति रकम करकट्टी भयो र सरकारी ढुकुटीमा दाखिला भयो कि भएन भन्ने कुरा सहजै हेर्न पाउँछन् । नेपालमा भने यस्तो सुविधा नहुँदा विभिन्न कम्पनीले करदाता कामदार÷कर्मचारीबाट अग्रिम कर कट्टी गर्ने तर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नगर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले के गरिरहेको छ ?
हामीले पनि गर्न सक्छौं, नसक्ने होइन । तर, नेपालमा त्यो सुविधा भने अहिले छैन । करदातालाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिँदा आम्दानी गरेर तिरेको करको जानकारी दिन्छौं । करदाता आफै जानकार भएर आउनुपर्छ । कर नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि हो । यसमा गोपनीयता हुनु जरुरी छ । करदाताले चाहेको खण्डमा पाउन सकिन्छ । विभिन्न कम्पनीहरूले करदाताबाट अग्रिम कर कट्टी गर्ने तर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेको नपाइने जस्ता गतिविधि हुनु भनेको करको दायित्व वहन नगरेर हो । करको भार र करको दायित्व दुईओटा कुरा हो । करको दायित्व भनेको अर्काबाट लिएको कर बुझाउने हो । दायित्वअनुसारको कर बुझाएको हो÷होइन भन्ने विवरण हरेक महीनाको २५ गते लिइन्छ । बुझाएको छैन भने सरकारले सोही व्यक्ति÷कम्पनीबाट ब्याजसहितको रकम असुल कानूनी व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । अर्काे आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत टीडीएस भेरिफिकेशन गरिन्छ, कैफियत भेटिएमा कारबाही हुन्छ । करको दायित्व भएका कम्पनीहरूले समयमै नबुझाएमा कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ । कम्पनीले नतिरेको भन्ने भएमा प्यान नम्बर लिनुपर्छ ।
सरकारले कर चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय अपनाएको भनिए पनि करछलीका घटना बाहिर आएका छन् । के कर चुहावट नियन्त्रणमा राजस्व प्रशासन असफल भएको हो ?
राजस्व प्रशासन कसरी असफल भएको मान्न सकिन्छ ? कर छली भएको जानकारी आउनु कर प्रशासनको सक्रियता होइन र ? यो राजस्व छली गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाएको कुरा हो । राजस्व प्रशासनको सक्रियताकै कारण यी राजस्व छलीका कुरा बाहिर आएका हुन् । आन्तरिक राजस्व पूर्णरूपमा सफल भएको मान्न सकिँदैन । तर कर छली तथा चुहावट रोक्न केही हदसम्म भए पनि सफल भएको छ । राजस्व चुहावट रोक्न विभिन्न कार्यविधि तथा काम भइरहेका छन् । पूर्णरूपमा हामी सक्रिय भएका छौं । कर छल्ने नियतबाट कुनै काम भएमा त्यसलाई जघन्य अपराधको रूपमा लिएर कानूनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले लक्ष्यअनुरूपको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन । यसले के सङ्केत गर्छ ?
चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा रू. १ सय ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख लक्ष्य रहेको थियो । यसमध्ये सङ्कलन भने रू. १ सय ४६ अर्ब ५२ करोड २६ लाख भएको छ । यो महीनाभरमा सङ्कलन हुन्छ । लक्ष्यअनुसार कम भएकै हो । लक्ष्यअनुसार केही कम हुनुमा बाढीपहिरो कारण हो । बाढीका कारण भन्सारहरू बन्द भएका र केही कण्टेनर रोकिएका कारण पहिलो त्रैमासिकमा यस्तो समस्या देखिएको हो । वीरगञ्ज भन्सार नै करीब ७ दिनसम्म बन्द भयो । ड्राइपोर्टमा कण्टेनरहरू आउन सकेनन् । यसलाई पु¥याउने लक्ष्यसहित हामी अघि बढेका छौं । अब पहिलो चौमासिकको अन्त्यमा लक्ष्यअनुरूप राजस्व सङ्कलन गर्छौं ।
अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन भएसँगै राजस्वको संरचना परिवर्तन भएर प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै जानुपर्ने हो । तर, नेपालमा भने अझै पनि अप्रत्यक्ष करकै हिस्सा अत्यधिक छ । यस विषयमा सरकारको योजना के छ ?
ऐतिहासिक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा १० वर्ष अघिसम्म राजस्वमा भन्सार महसूल बढी थियो । यसले नै धेरै राजस्व सङ्कलनमा योगदान पुर्‍याएको थियो । अहिले आएर मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको अंशहरू बढ्दै गएको अवस्था छ । आयकर बढ्दै जानु भनेको प्रत्यक्ष कर हो । विश्वव्यापी रूपमा उपभोगमा आधारित भएको करले पनि योगदान गर्ने नै हो । उपभोगमा आधारित कर र प्रत्यक्ष करले नै अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी र समृद्ध बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अवस्थामा अहिले आयकरले कुल राजस्वमा गर्ने योगदानको अंश बढाइरहेको कारणले हामी अर्थतन्त्रको संरचनाको परिवर्तनसँगै प्रत्यक्ष करको अंश बढ्दै गएको छ । यो हाम्रो लागि सुखद छ । आगामी दिनमा बढाउन तत्पर र क्रियाशील छौं ।
हाम्रा नीतिहरू तद्दिशातर्फ अग्रसर हुँदै जानेछन् । मूल्यअभिवृद्धि कर अहिले पनि हाम्रा लागि दिगो स्रोत छ । यो अप्रत्यक्ष कर हो, तर यो नराम्रो करको स्वरूप होइन । संसारभरि हेर्ने हो भने यो उपभोक्तामा आधारित करले राजस्व सङ्कलनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्छ । त्योभन्दा पछिको भाग प्रत्यक्ष करले गर्छ । कुनै कुनै स्केण्डिनेभियन देशहरूमा प्रत्यक्ष कर बढी भएको देखिन्छ । नेपालमा यो दुवै अघि बढेको र आयकर पनि विस्तारै राम्रो गतिमा आएको र एउटा निश्चित बिन्दु वा ५–७ वर्षपछि आयकरले मूल्य अभिवृद्धि करलाई जित्न सक्ने अवस्था छ । यो प्रत्यक्ष करको अंश कर प्रणालीमा बढ्ने आधार भइसकेका छन् । यो बढ्नेमा हामी दृढ विश्वस्त छौं ।
सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा भ्याट फिर्ता (छूट) गर्दैै आएको छ । यसबाट उपभोक्ता भन्दा व्यापारीलाई बढी फाइदा भएको देखिन्छ । उपभोक्तालाई राहत दिन कर दिवसका अवसरमा के कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीकहाँ अहिले पनि सिङ्गल ट्याक्स दर छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता खालका माल वस्तुहरूको अनधिकृत व्यापार र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयोजनका लागि र औपचारिक माध्यमबाट आयातको व्यवस्था गर्न हामीले विगतमा मोबाइलमा त्यस्ता खालको भ्याट छूटको व्यवस्था गरेका हौं । तर पछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा प्राविधिक पक्षमा केही सुधार गर्दै त्यो हिस्सा घटाउँदै ल्याएका छौं । पहिला ६६ प्रतिशत फिर्ता हुन्थ्यो भने अहिले ४० प्रतिशत मात्र फिर्ता हुने व्यवस्था गर्‍यौं । यसरी विस्तारै घटाउँदै गएका छौं । अनधिकृत ढङ्गले र चोरी पैठारीबाट आउन सक्ने मालवस्तुहरूको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट त्यो छूट दिएको हो । यसको प्रभाव उपभोक्तामा पर्नै पर्छ । परेको छ भन्ने महसूस गरेका छौं । यो मात्र होइन, यस्ता खालका छूट अरूमा पनि दिएका छौं । जस्तै– चिनी, मैदा, घीउ, तेललगायतमा दिएका छौं । नेपालको आन्तरिक उत्पादनको क्षमता वृद्धिका लागि पनि हामीले योगदान गरेको हो । हामी सधैं आयातमा आधारित अर्थतन्त्र गर्ने हो वा यहाँ नै उत्पादन गर्न सक्ने उत्पादनशील अर्थतन्त्र गर्ने भन्ने खोजी हो । नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रलाई जोगाउन हामीले यो अवधारणा ल्याएका हौं ।
कर दिवसको अवसरमा कमीकमजोरी सुधार्न सरकारले केही समयअघि करको प्रभावकारिता र औचित्यको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । यसको आधारमा हामीले क्रमशः परिमार्जन गरिरहेका छौं । यो परिमार्जन गर्ने र प्रणाली बनाउने क्रम निरन्तर रहिरहन्छ । हामीले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने दुवैलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिरहन्छौं । यसै दिशातर्फ आगामी दिनको कर नीति तथा कर प्रशासनका क्रियाकलाप निर्देशित रहने निश्चित छ ।